Famerenana ny WKG - Worldwide Church of God Switzerland
Iza moa izahay? > Ny ivon'ny WKG > Famerenana ny WKG
Maty tamin'ny Janoary 1986 i Herbert W. Armstrong tamin'ny faha-93 taonany. Ny nanorina ny Fiangonana Eran-tany manerantany dia lehilahy niavaka, izay misy fomba fitenenana sy fomba fanoratra mahavariana. Niaiky ny olona mihoatra ny 100.000 ny fandikana ny Baiboly izy ary nanangana ny Fiangonan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ho radio, fahitalavitra ary famoahana boky izay nahatratra ny tampon-taonany mihoatra ny olona 15 tapitrisa isan-taona.
Ny fanamafisana mafy ny fampianaran'i Mr. Armstrong dia ny finoana fa ny Baiboly dia manana fahefana bebe kokoa noho ny fomban-drazana. Vokatr'izany, ny WKG dia nandika ny fandikana ny Soratra Masina na aiza na aiza misy ny fomba fijeriny sy ny fanaon'ny fiangonana hafa.
Taorian'ny nahafatesan'i Atoa Armstrong tamin'ny 1986, dia nanohy nianatra ny Baiboly ny fiangonantsika, tahaka ny nampianariny anay. Fantatray anefa fa misy valiny samy hafa noho ireo nampianariny taloha. Indray dia voatery nifidy teo amin'ny Baiboly sy ny fomba amam-panao isika - tamin'ity indray mitoraka ity amin'ny Baiboly sy ny fomban-drazantsika. Nifidy Baiboly indray izahay.
Fihetsika vaovao ho anay io. Tsy mora ary tsy vita haingana. Taona isan-taona dia hita ny lesoka momba ny fotopampianarana ary fanitsiana natao sy nanazava. Ny fanombantombanana momba ny faminaniana dia nosoloina tamin'ny fitoriana sy fampianarana ny filazantsara.
Efa niantso ny kristiana hafa tsy niova izahay, ankehitriny antsointsika hoe namana sy fianakaviana izy ireo. Very izahay mpikambana, mpiara-miasa, very ny fandaharana radio sy fahitalavitra ary saika ny boky aman-gazetintsika rehetra. Very ny zavatra betsaka tianay taloha izahay ary tsy maintsy "mandady hitsambikina" imbetsaka. Nahoana? Satria ny Baiboly tokoa dia manana fahefana lehibe kokoa noho ny fanaontsika.
Ny fanovana ny fotopampianarana dia naharitra 10 taona - 10 taona nisavorovoroana, ny famerenana indray. Mila mamerina mandinika ny tenantsika isika rehetra, mamerina mihevitra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fanovana lehibe indrindra tamin'ny ankamaroan'ny mpikambana dia niseho 10 taona lasa izay - rehefa nanohy ny fianarantsika ny Baiboly dia nanambara fa tsy mitaky ny olony intsony Andriamanitra hitandrina ny Sabata andro fahafito sy ny lalàn'ny Testamenta Taloha.
Mampalahelo fa misy mpikambana maro tsy afaka nandray izany. Mazava ho azy fa afaka mitandrina ny sabata raha te hanana izy ireo, saingy maro no tsy faly dia tao amina fiangonana izay tsy mitaky ny hitandreman'ny olona azy. An'arivony no nandao ny fiangonana. Nidina an-taonany maro ny vola miditra am-piangonana ka nanerena anay handatsaka fandaharana. Noterena hihena ny isan'ireo mpiasa ao koa ny fiangonana.
Izany dia nitaky fanovana lehibe teo amin'ny rafitry ny fikambananay - ary mbola tsy mora izany ary tsy tonga tampoka izany. Raha ny marina, ny fanarenana ny fikambananay dia naharitra hatramin'ny fanamafisana indray ny fotopampianarana. Toetra maro no tsy maintsy namidy. Ny fivarotana Pasadena dia ho vita tsy ho ela, mivavaka izahay, ary ny mpiasan'ny foiben'ny fiangonana (manodidina ny 5% amin'ireo mpiasa taloha) dia hifindra any amin'ny biraon'ny birao iray hafa any Glendora, Kalifornia.
Niorina ihany koa ny fokontany tsirairay. Ny ankamaroany dia manana pasitera vaovao izay miasa tsy misy karama. Ny serivisy vaovao dia novolavolaina, matetika miaraka amin'ny mpitondra vaovao. Ny hierarchies maro an'isa dia nihataka ary marobe hatrany ireo mpikambana handray andraikitra mavitrika rehefa miditra amin'ny vondron'olona misy azy ireo ny fokonolona. Ny talen'ny vondrom-piarahamonina dia mianatra miara-manao drafitra ary mametraka teti-bola. Fiandohana vaovao ho antsika rehetra izany.
Tian'Andriamanitra hiova isika ary nitaona anay tamin'ny kirihitra matevina, canyons twisty sy onjan-drano mivezivezy haingana araka izay vitantsika. Mampahatsiahy ahy ny sary misy sary iray ao amin'ny birao iray sahabo valo taona lasa izay - nopotehina ny departemanta iray manontolo ary ny tompon'andraikitra farany dia nametaka ny sariitatra teo amin'ny rindrina. Nasehony coaster roller, izay nipetraka tamin'ny maso be, izay nifikitra tamin'ny seza no niahiahy ny amin'ny fiainany mendrika. Ny lohateny eo ambanin'ilay sariitatra dia hoe: "Mbola tsy mandeha ny sidina bibidia." Marina izany! Tsy maintsy niady nandritra ny taona maro izahay.
Fa toa izao isika dia toa eo ambonin'ilay havoana, indrindra amin'ny fivarotana ireo fananana any Pasadena, ny fifindranay any Glendora sy ny fanarenana izay nanome ny vondron'olona ifotony handray andraikitra amin'ny volany sy ny serivisy. Nialantsika ny lalan'ny lasa ary efa manomboka fanombohana amin'ny asa fanompoana izay niantsoan'i Jesosy hataontsika. 18 ny fiangonana mahaleo tena no niara-nanangana anay ary nanangana fiangonana 89 vaovao.
Ny Kristianisma dia mitondra fanombohana vaovao ho an'ny rehetra - ary tsy dia malama sy milamina foana ny dia. Amin'ny maha-fikambanana antsika, nifandimby, nifamadika, nanomboka ny diso ary U-turn. Manana fahasalamana sy fotoanan'ny krizy isika. Ny fiainana kristiana dia matetika mitovitovy amin'ny an'ny tsirairay - misy fotoam-pifaliana, fotoanan'ny fanahiana, fotoanan'ny fahaterena ary fotoanan'ny krizy. Amin'ny fahasalamana sy ny aretina dia manaraka an'i Kristy any an-tendrombohitra sy eny amin'ny lohasaha isika.
Ny gazety vaovao miaraka amin'ity taratasy ity dia taratry ny tsy fahampian'ny fiainana kristianina. Amin'ny maha-Kristiana antsika dia fantatsika izay alehantsika, fa tsy fantatsika izay mety hitranga eny an-dàlana. "Christian Odyssey" (ilay magazay vaovao "Christian Odyssey") dia hanolotra mpikambana ary koa lahatsoratra tsy ara-Baiboly, fotopampianarana ary tsy azo ampiharina ho an'ny fiainana Kristiana. Na dia efa niseho tao amin'ny Worldwide News teo aloha aza ireo lahatsoratra ireo, dia nifidy ny hanavaka ny vaovaom-piangonana amin'ny fampianaran'ny Baiboly izahay amin'ny famoronana magazine roa. Amin'izany fomba izany, Christian Odyssey dia afaka manompo olona izay tsy mpikamban'ny fiangonantsika.
Hivoaka ao amin'ny magazine "WCG Today" ny vaovaom-piangonana. Ireo mpikambana WKG any Etazonia dia hanohy handray ireo magazine roa, miaraka amin'ny taratasy avy amiko. Ireo tsy mpikambana (any Etazonia) dia afaka manafatra famandrihana amin'ny "Christian Odyssey" amin'ny alàlan'ny telefaona, mailaka na Internet. Tianay ny hamporisika anao hizara ny magazine «Christian Odyssey» amin'ny namanao ary hanasa azy ireo hanafatra ny famandrihana azy ireo.